कोइराला निवासको बत्ती- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कोइराला निवासको बत्ती
माघ १३, २०७४ दिनेशचन्द्र थपलिया
काठमाडौँ — नोना कोइरालाको निधनलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भावविह्वल हुँदै भन्नुभयो, ‘कोइराला निवासको बत्ती निभ्यो, त्यो रिक्तता कसले पूरा गर्ने?’ नोना नेपाली राजनीतिभित्रको त्यो नाम हो जसले मात्र त्याग र निष्ठाको राजनीतिको प्रतिनिधित्व गर्छ। राजनीति केवल प्राप्तिका लागि गरिन्छ भन्ने समकालीन नेपाली नेताले नोनाबाट धेरै कुरा सिक्न जरुरी छ। नोना राजनीतिक, सामाजिक, सभ्य र अनुशासित परिवारको सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो।
नोनाको राजनीतिक जीवनको सुरुवात २००३ सालको मजदुर आन्दोलनबाट भएको हो। त्यतिबेला उहाँले मजदुर आन्दोलनका घाइतेहरूलाई औषधि उपचार र भोजन व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुभएको थियो। निरंकुश राणा शासनविरुद्ध २००७ सालमा कांग्रेसले सञ्चालन गरेको सशस्त्र मुक्ति आन्दोलनमा नोना प्रत्यक्ष होमिनुभयो। २००७ सालको क्रान्तिमा मुक्ति योद्धाका कमान्डरका रूपमा आफ्ना छोराहरू बीपी कोइराला, मातृका कोइराला, केशव कोइराला, तारिणी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइराला जान लाग्दा दिव्या कोइरालाले बुहारीहरूलाई बोलाएर भन्नुभएको थियो, ‘मेरा छोराहरू लडाइँमा जाँदै छन्, उनीहरू मर्न पनि सक्छन्, यदि उनीहरू मरि नै हाले पनि तिमीहरूले आँसु नझारे।’ (नेपाली राजनीतिमा नोना कोइराला–इन्दिरा प्रसार्इं)। सासूको यही वचनले नोना कोइरालालाई थप कठोर एवम् साहसिक बनाएको थियो। त्यसैले हरेक निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा सधैं अग्रमोर्चामा देखिनुभयो। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नोनासमेतको अगुवाइमा विराटनगरमा ‘नारी जागृति’ संस्था स्थापना भयो। यही संस्थाबाट नारीहरूलाई पढ्न, लेख्न र सामाजिक रूपले अगाडि बढाउने अभियानमा लाग्नुभयो। आज त्यो संस्था आदर्श बालिका विद्यालयमा परिणत भएको छ।
२०१५ सालको प्रथम आम चुनावमा बीपीले कहाँबाट टिकट लिने भनेर सोध्दा नोनाले ‘सांसद वा मन्त्री बन्न राजनीति गरेकी छैन, म पार्टीमै काम गर्छु’ भनेर टिकट लिन अस्वीकार गर्नुभयो। २०१७ को शाही ‘कु’ पछि नोना पुन: प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिनुभयो। पाटनको शान्त भवन अस्पतालमा अप्रेसनपछि बेहोस अवस्थामै रहेका आफ्ना १० वर्षीया छोरा शेखर(डा. शेखर कोइराला) लाई डाक्टरको जिम्मा लगाएर शाही ‘कु’ विरुद्ध सडकमा उत्रनुभयो। भूमिगत रहनुभएकी नोनाले २०१७ फागुन १२ गते धादिङबाट आएका तामाङ समुदायका महिलाको विरोध जुलुसको नेतृत्व गर्नुभयो र सुरक्षाकर्मीले घेरा हालेर उहाँलाई त्यहाँबाटै पक्राउ गर्‍यो। त्यसपछि उहाँलाई शैलजा आचार्यहरूलाई थुनिएको थानामा लगियो। पछि उहाँलाई १ वर्ष कैद र ५ सय रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइयो। जेल बसाइलगत्तै विराटनगर जाने क्रममा २०१९ सालमा उहाँलाई बम ओसारेको आरोपमा पुन: गिरफ्तार गरियो। २०२१ मा जेलबाट नोना बीपी कोइरालासँगै निस्केर २०२४ मा प्रवास जानुभयो। प्रवासमा रहँदा पटना, फारबिसगन्ज, बनारसलगायत स्थानमा रहेका कार्यकर्ताको भरणपोषणको समेत जिम्मेवारी बहन गर्नुभयो। आममाफी पाएसँगै सबै कार्यकर्तालाई नेपाल पठाइसकेर गिरिजाप्रसाद कोइराला, वसन्त भट्टराई, दुर्गा सुवेदी, गोपाल राईलगायतसँग उहाँ स्वदेश फर्कनुभयो। प्रवासमा रहँदा पनि नोनाले हतियार संकलन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुभयो। बीपी कोइरालाले एकपटक गिरिजाप्रसादलाई भन्नुभएको थियो, ‘हतियार संग्रह गर्ने त्यस्ता जोखिमपूर्ण ठाउँमा तँ आफैं जाँदैनस्, खालि नोनालाई मात्र पठाउँछस्।’
जनमत संग्रहको समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा निस्किएको देशव्यापी पैदलयात्रा टोलीमा नोना मात्र महिला सदस्य हुनुहुन्थ्यो। यसै क्रममा नोनाले ६५ भन्दा बढी जिल्ला भ्रमण गर्नुभएको थियो। २०३९ मा पति केशव कोइरालाको निधनपछि पनि उहाँले आफ्नो राजनीतिक यात्रा रोक्नुभएन।
२०४६ सालको आन्दोलनमा नोनालाई पम्प्लेट, पोस्टर र झन्डाको जिम्मेवारी दिइएको थियो। प्रहरीले २०४६ फागुन ५ मै नोनालाई विराटनगरस्थित कोइराला निवासबाट पक्राउ गर्‍यो। किसुनजी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला बालुवाटारबाट फोन गरेर नोनालाई भन्नुभएको थियो, ‘म भोलि राजाकहाँ जाँदै छु, मन्त्रीमा तपाईंको पनि नाम राखेको छु। कुन मन्त्रालय लिने इच्छा छ?’ ‘मलाई राष्ट्रिय सभाबाट लिन खोज्नुभएको होला, बिन्ती छ मलाई मन्त्री नबनाउनुहोला। शरीरमा एक थोपा रगत रहेसम्म पार्टीमा काम गर्छु, म मन्त्री बन्दिनँ,’ नोनाले भन्नुभएको थियो। नोना विराटनगरस्थित कोइराला निवासलाई संस्कारयुक्त बनाउने काममा अहोरात्र खटिनुभयो। पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाले स्थापित गरेका परम्परा र संस्कारलाई उहाँले जोगाइराख्नुभयो।
२००३ को भवानीपुरदेखि २०५७ सालसम्मको पार्टी महाधिवेशनमा नोनाले भाग लिनुभयो। २०४८ देखि २०६२ सालसम्म पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा रहनुभयो। उहाँलाई २०५५ सालमा नेपाली कांग्रेसको महिला विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो। नेपाल महिला संघको प्रथम महाधिवेशन नोनाले नै सम्पन्न गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा महिलालाई आरक्षण, पार्टीको महाधिवेशन र महासमितिमा हरेक क्षेत्रबाट १ जना महिला अनिवार्य, हरेक प्राविमा १ महिलाको दरबन्दीलगायत विषयमा उहाँले सधैं आवाज उठाउँदै आउनुभयो र सम्पूर्ण महिलाको प्रेरणाको स्रोत बन्नुभयो।
‘मनमा शुद्धता र कर्ममा विश्वास भए आफंै सफल भइन्छ’ भन्नेमा नोनाको विश्वास थियो। उहाँले २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्नुभयो। युवाका निम्ति अदम्य साहस बनेर उभिनुभयो। सबैले सम्मान गर्ने नोना आमा भनिएर रहनुभयो। पछिल्ला दिनमा कोइराला परिवारको जिम्मेवार र परिपक्व अभिभावक आफ्ना देवर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सर्वाधिक आडभरोसा र प्रेरणाकी स्रोतका रूपमा रहनुभएकी नोनाको २०६३ माघ १४ गते निधन भयो।
प्रकाशित : माघ १३, २०७४ ०९:०५
पद नखोज्ने बीपीका भाइ
वैशाख ४, २०७४ दिनेशचन्द्र थपलिया
केशवप्रसाद कोइराला नेपाली राजनीतिक आन्दोलनका मुर्धन्य व्यक्तित्व अर्थात समाज रूपान्तरण र मुलुक निर्माणका लागि आफ्नो जीवनका महत्त्वपूर्ण समय जनता र मुलुकका लागि खर्चनुभएको व्यक्ति । राजनीतिको संकटपूर्ण मोडहरूमा क्रान्तिको मैदानमा ओर्लनुभएका तर राजनीति सामान्य अवस्थामा फर्केपछि राजनीतिभन्दा घरव्यवहार र खेतीपातीमा जीवन समर्पित गर्नुभएका व्यक्ति ।
राणा र पञ्चायतको निरंकुशता विरुद्ध सबैभन्दा कठोर भएर क्रान्तिको मैदानमा अहोरात्र खट्नुभएका क्रान्तिकारी व्यक्तित्व । अहिले उहाँ पूर्णरूपमा ओझेलमा हुनुहुन्छ ।
राणा शासनको विरोधमा पहिलोपटक विगुल फुकेको विराटनगरको कोइराला परिवारका आदर्शवान सदस्य केशव कोइरालाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्‍याउनुभएको भूमिका र योगदानको अहिले कहीं कतै चर्चा हुँदैन । आफ्ना दाजु मातृका र बीपी र भाइहरू गिरिजा र तारिणीले राजनीतिमा मात्रै जीवन बिताए, तर केशव कोइरालाको काँधमा तीनवटा जिम्मेवारी एकैसाथ आइपर्‍यो । राजनीतिक जिम्मेवारी, पारिवारिक जिम्मेवारी र कार्यकर्ता भरणपोषणको जिम्मेवारी ।
परिवारका सबै सदस्य प्रवासमा बस्न थालेपछि परिवार व्यवस्थापन, खेतीपाती र विराटनगरमा रहेका कांग्रेस कार्यकर्ताको हेरविचारको जिम्मेवारी उनको काँधमा आयो । जस्तोसुकै कठिन र प्रतिकूल अवस्थामा पनि उहाँ डगमगाउनु भएन र आफ्नो जिम्मेवारीबाट विचलित हुनुभएन । २००३ सालमा भारतमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनापछि लोकतन्त्रको राजधानी मानिएको विराटनगर लगायत अन्य जिल्लामा सदस्य पठाउने जिम्मा केशवले पाउनुभयो । २००३ सालबाट विराटनगरमा सुरु भएको मजदुर आन्दोलन चर्कंदै गएपछि बीपी र मातृकासँगै केशव पहिलोपटक गिरफ्तार हुनुभयो । २००५ सालमा सञ्चालन भएको सत्याग्रहमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएका केशव दूरगामी सोचाइ राख्न सक्ने, तत्कालै सही निर्णय लिन सक्ने र तीक्ष्ण क्षमताका हुनुहुन्थ्यो ।
राणाशासन विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्ने वैरगनिया सम्मेलनको निर्णय लगत्तै हतियार जम्मा गर्ने, ल्याइएका हतियारहरू सफा गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित ढंगले मुक्ति सेनाका लडाकु दस्तासम्म पुर्‍याउने काम उहाँले नै गर्नुभयो । त्यतिबेला केशव कोइरालाले विराटनगर कमाण्डरको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । २००७ कात्तिक २५ र २६ गतेको शून्य समयमा मुक्ति सेनाले वीरगन्ज कब्जा गरेर सशस्त्र क्रान्ति सुरुवात गर्‍यो । काठमाडौंपछिको ठूलो र लोकतन्त्रको उद्गम थलोको रूपमा रहेको विराटनगर कब्जा गर्नु र त्यसको सन्देश अन्यत्र फैलाएर युद्धमा होमिएका मुक्ति सेनाहरूको मनोबल उच्च बनाउनु थियो ।
एकै पटकमा विराटनगर आक्रमण गर्नु सम्भव थिएन । त्यसकारण केशव कोइराला र विश्वबन्धु थापाको नेतृत्वको मुक्ति सेनाले २००७ कात्तिक ३० गते विराटनगरको रंगेली कब्जा गर्‍यो र झापातर्फ अगाडि बढ्यो । मंसिर ४ गते झापा ब्यारेक आक्रमण गर्‍यो । राणा सरकारले सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा बनाएको विराटनगरमा कमाण्डर केशव कोइरालाको नेतृत्वको मुक्ति सेनाले आक्रमणको सम्पुर्ण तयारी पुरा गरेपछि मंसिर २१ गते कमाण्डर इन चिफ सुवर्ण शमशेरले विराटनगर मोर्चाको निरीक्षण गर्नुभयो ।
मंसिर २३ गते मुक्ति सेनाले विराटनगर आक्रमण सुरु गर्‍यो । उक्त आक्रमण सफल नभएपछि पुन: पुस ८ गते बीपी कोइराला समेतको प्रत्यक्ष सहभागितामा फेरि विराटनगर आक्रमण गरियो । र उक्त क्षेत्र पूर्णरूपले नेपाली कांग्रेसको नियन्त्रणमा आयो । केशव कोइराला क्रान्तिकारी सरकारको गभर्नर हुनुभयो । कोइरालाले नै मजदुरको तलब वृद्धि गर्ने, मजदुर युनियन खोल्न पाउने, ‘जसको जोत उसकै पोत’जस्ता क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरे । केशव कोइरालाकै समयमा विराटनगरमा विद्यालयहरू खुले, विमानस्थल निर्माण भयो, खानेपानी, ढल निर्माण र सडक निर्माणजस्ता काम भए । हिन्दुस्तानमा राममनोहर लोहियाले ‘भाइभतिजाको भर दिया हैं’ भनेर बीपीका विरुद्ध गलत प्रचार गर्न थालेपछि गभर्नर पदबाट केशवलाई राजीनामा गर्न लगाइयो र भूपालमान सिंहलाई उक्त पदमा नियुक्त गरिएको कुरा बीपीको आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०१२ सालमा सुवर्णशमशेर नेपाली कांग्रेसको सभापति बन्नुभएपछि केशव कोइरालालाई कांग्रेस पूर्वाञ्चल इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइयो । २०१७ सालमा उहाँ विराटनगरको पहिलो निर्वाचित मेयर बन्नुभयो । २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद् र सरकार विघटन गरेपछि केशव कोइराला प्रवास लाग्नुभयो । प्रवासमा रहँदा केशवले नेपालबाट विस्थापित भएर प्रवास गएका कार्यकर्ताहरूको भरणपोषण र पार्टीको क्रियाकलाप तथा गतिविधि एकसाथ कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो । आममाफीपछि ८ वर्षको निरन्तर प्रवास बसाइपश्चात २०२५ सालमा केशव नेपाल फर्किनुभयो । २०१७ पछि लगातार १० वर्ष केशव कोइरालाको आफ्नी धर्मपत्नी नोना कोइरालासँग भेट भएन । नोना जेलमा हुँदा केशव प्रवासमा र केशव जेलमा हुँदा नोना प्रवासमा हुने क्रम भइरह्यो । कांग्रेसले पञ्चायत विरुद्ध पुन: सशस्त्र क्रान्तिको तयारी गरिरहँदा २०२९ सालमा केशव पक्राउ पर्नुभयो र २ वर्षपछि २०३१ वैशाखमा विराटनगर जेलबाट रिहा हुनुभयो ।
समाज रूपान्तरणका अभियन्ता केशव साँच्चै क्रान्तिकारी स्वभावका हुनुहुन्थ्यो । छोराछोरी र बुहारीलाई समान रूपले हेर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ उहाँमा थियो । यदि बीपी र गिरिजा पारिवारिक जालोमा अल्झिनुभएको भए र केशवले पारिवारिक विरासत र खेतीपातीको पाटो नथेग्दिएको भए सायद उनका दाजुभाइ मुलुकको सर्वोच्च स्थानमा पुग्न असम्भव थियो भन्ने कुरा बम्बईको टाटा अस्पतालबाट बीपीले केशवलाई लेखेको चिठीबाट नै प्रमाणित हुन्छ (कोशु, मेरो स्वास्थ्यको सम्बन्धमा नोनाले सबै कुरा बताउनेछिन् । नोनालाई मैले बम्बई लिएर गएँ, तिमीलाई केही असुविधा भयो होला । हामी दुवैलाई ठूलो रोग लाग्यो, ओखती उपचारले जति दिन धान्छ, त्यति दिन धान्नेछौं । तिमीले सारा हेरविचार गरेका थियौ । मेरा भाइहरूको ठूलो मद्दतले मैले केही गर्नसकेंँ । कोइरालाहरूको केन्द्रभूमि–पिताजीको कर्मक्षेत्र–विराटनगरमा हाम्रो अस्तित्वको रक्षा तिमीबाट भएको छ । हाम्रो सेखपछि छोराहरूले एकदम एकता राखेर विजयीको कृतिलाई कायम राख्नेछन् । म सोमबारतिर सोझै काठमाडौं फर्किन्छु, बुनु, गिरिजा र शैलजासँग । सुशीला, प्रकाश, नोना र चेतना बनारस जान्छन् । मैले सकेँ भने १/२ दिनका लागि तिमीसँग भेट्न विराटनगर जानेछु । त्यहाँ सबैलाई सम्झेको छ भनिदिनु । माया गर्ने– सान्दाजु)।
केशवले राजनीतिमा होमिएका मातृका, बीपी र गिरिजालाई पारिवारिक बोझ कहिल्यै दिनुभएन र कोइराला परिवारको विरासत जोगाइराख्नुभयो । सन्ततिको निम्ति संस्कार सिकाउने असल गुरु बन्नुभयो । प्रजातन्त्रमा आइपरेका संकटपूर्ण मोडहरूमा सधैं क्रान्तिको मैदानमा उत्रनुभयो ।
तर बदलामा कहिल्यै पद, प्रतिष्ठा र सम्मानको लालसा देखाउनुभएन । राजनीतिमा प्राप्तिमात्रै होइन, त्याग पनि चाहिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण देखाउनुभयो । त्यसको दम्भ र घमन्ड उहाँमा कहिल्यै आएन ।
परिवार व्यवस्थापन, खेतीपाती र राजनीतिक आन्दोलनमा लागिरहँदा केशवले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने समय पनि पाउनु भएन । २०३८ सालको अन्ततिर उहाँ अत्यन्तै बिरामी हुनुभयो । उपचारको लागि अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा लगियो, तर क्यान्सरले ग्रस्त बनिसक्नुभएका केशवको उपचार असम्भव देखेपछि विराटनगर ल्याइयो । अन्तत: २०३९ वैशाख ४ गते उहाँको देहान्त भयो । केशव कोइरालाका जेठा छोरा निरञ्जन कोइराला व्यापारमा संलग्न छन् भने कान्छा छोरा डा. शेखर कोइराला कांग्रेस राजनीतिमा छन् ।
प्रकाशित : वैशाख ४, २०७४ ०८:०८